Fifanarahana momba ny retainer ho an'ny orinasa any UAE | Amal Khamis Mpisolovava sy mpanolo-tsaina ara-dalàna
Fifanarahana momba ny retainer ho an'ny orinasa any UAE
Serivisy retainer ho an'ny orinasa any UAE
fifanarahana fitazonana ho an'ny orinasa
Ny fifanarahana mpitazona dia miavaka amin'ny sehatry ny asa satria mahazo vola alohan'ny asa mbola hatolotrao ianao. Tsy mitovy amin'ny zavatra azo tratrarina amin'ny fifanakalozana orinasa izany, izay tokony hataterinao alohan'ny handoavana karama.
Tena mahasoa tokoa ny fifanarahana mpitazona, indrindra ho an'ireo mpiasa tsy miankina izay miaina miaraka amin'ny pendulo eo anelanelan'ny "fety na mosary" ny fiainam-piasana. Na asa be dia be amin'ny fotoana iray na tsy fahampiana ao aminy. Ny fananana fifanarahana retainer miaraka amin'ny mpanjifa dia manampy amin'ny fanamafisana ny fidiram-bola amin'ny freelancer ary manome fotoana mety hananganana portfolio.
Ho fanampin'izay, ny fananana fifanarahana mpihazona na bebe kokoa amin'ny portfolio-nao dia manome ny satan'ny 'manam-pahaizana'. Izany dia satria ny fifaneken'ny retainer dia mahatonga ny mpanjifa mety hahatsapa anao ho manam-pahaizana ary manana sanda betsaka hatolotra azy ireo. "Ny tiako holazaina dia (s) fa tsy afaka nifanaraka tamina olona izy raha tsy fantany izay momba azy", hoy ny mety ho mpanjifa.
Na dia zavatra tiana ho an'ny freelancer aza ny fifanarahana retainer, mariho fa tsy miasa ho an'ny freelancer irery izy io fa ho an'ny mpandraharaha rehetra mitady hampitony ny fidiram-bolany. Nilaza izany fa zava-dehibe ny mahatakatra ny atao hoe fifanarahana retainer sy ny fomba ahafahanao mampiasa izany mba hisy fiantraikany lehibe amin'ny orinasanao. Ao amin'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, manolotra serivisy Retainer ho an'ny orinasa sy orinasa any UAE izahay.
Inona no atao hoe fifanarahana mpihazona?
Ny fifanarahana retainer dia fifanarahana eo amin'ny freelancers sy ny mpanjifany izay mitazona ny serivisin'ny freelancer mandritra ny fotoana maharitra ary manome fandaharam-potoana fandoavam-bola amin'ny mpiasa tsy miankina. Ny fifanarahana retainer dia tsy mitovy amin'ny endrika fifanarahana hafa na maodely momba ny vidiny satria mandoa mialoha ny serivisinao ny mpanjifa. Indraindray, ny tena toetran'ny serivisy dia tsy voatsipelina mazava. Na izany aza, ny serivisy dia rakotra ao anatin'ny sehatry ny môdely momba ny asa natolotrao ho azy ireo.
Ankoatry ny toetoetran'ny serivisy antenainao homena, ny fifanarahana mitazona ihany koa dia mamaritra ny adidy samihafa amin'ny roa tonta sy ny andrasana amin'ny andaniny roa. Mety tafiditra ao anatin'izany ny fitsipiky ny asa, ny saram-pananana, ny fomba fifandraisana ary ny lalàna mifehy ny matihanina.
Maninona ny fifanarahana mpitazona no mety amin'ny orinasanao?
Ny orinasa, indrindra ireo eo amin'ny sehatry ny serivisy, dia manomboka miantehitra bebe kokoa amin'ny fifanarahana fitazonana. Manana tombony be dia be izy io fa tsy azon'ny mpandraharaha marani-tsaina jerena. Ireo tombontsoa ireo dia tsy mihatra amin'ny mpanome tolotra irery fa ho an'ny mpamatsy tolotra sy ny mpanjifany. Ny sasany amin'izy ireo dia:
Ny drafi-pifanarahana mpiambina dia manome antoka fa ny mpanome tolotra, freelancer, amin'ity tranga ity, dia handray karama tsy tapaka. Miaraka amin'ny fahatokisan'ny vola miditra amin'ny faran'ny volana, ny mpanome tolotra dia afaka mifantoka tanteraka amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny olany ary manome asa kalitao avo lenta. Izany dia mitranga tsy hoe satria mahazo antoka ny fidiram-bola ny mpiasa tsy miankina amin'ny faran'ny volana fa koa satria tsy mandany fotoana mitady mpanjifa vaovao mandoa vola dia afaka manokana an'io fotoana io amin'ny mpanjifa voatana izy io.
Ireo mpanjifa koa dia mahazo tombony amin'ny fandaminana satria azony antoka fa misy ny mpanome tolotra azy ireo. Ary koa, ny fifanarahan'ny mpitazona dia manana fomba fampivoarana ny fizotry ny asa, ka vokatr'izany dia ahazoana tombony tsara kokoa ho an'ny mpanjifa ary farany, ny mpanome tolotra. Ny fifandraisan'ny freelancer amin'ny mpanjifa amin'ny fifanarahana retainer dia toa lalindalina kokoa sy feno kokoa noho ny mpanjifa mahazatra. Izany dia vokatry ny fotoana nitomboan'ny fotoana sy ny fotoana tokony hiarahan'ny roa tonta miasa ary ny fotoana anomezan'ny andaniny sy ny ankilany ny volany hanamafisana ireo olana marefo amin'ny fifandraisana.
Ny fahamendrehan'ny fifaneken'ny retainer dia ahafahan'ny freelancer maminavina ara-dalàna ny fikorianan'ny vola isaky ny mandeha, ka manome mazava kokoa sy rafitra tsy manam-paharoa ho an'ny orinasa. Miaraka amin'ny fikorianan'ny vola tsy miova, ny freelancer dia afaka misahana tsara kokoa ny fandaniany vola mahasarika ny orinasa.
Ireo ampahany tsy dia lehibe loatra amin'ny fifanarahana mpihazona
Tsy mampino raha toa ny feon'ireo mpihazona fifanarahana avy amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa sy ny fomba fijery tsy miankina. Na dia mety miady hevitra aza ny sasany fa ny tombony azony dia lehibe lavitra noho ny lesoka, dia zava-dehibe ny fahalalana ny zava-misy rehetra alohan'ny hisafidianana fifanarahana fitazonana. Ny sasany amin'ireo lesoka dia:
● Mihidy ao anaty
Ho an'ny ankamaroan'ny mpiasa tsy miankina dia nisafidy ny ho lasa freelancer satria te ho tompon'andraikitra amin'ny fandaniany ny fotoanany izy ireo - ao anatin'izany ny olona hiasa isaky ny fotoana sy ny asa tokony hatao.
Miaraka amin'ny fifanarahana fitazonana, ny sasany amin'izany "fahalalahana" izany dia nesorina satria mifatotra amin'ny mpanjifanao mandritra ny ora maromaro ianao. Tsy anao intsony ireo ora ireo ary izay mety ho nataonao tamin'io fotoana io dia tsy ho azonao atao intsony.
● Manary vola
Raha ny fahitan'ny mpanjifa anao dia mety hitera-doza ianao amin'ny "fandaniana vola tsy mila laniana". Izany dia satria mety hisy fotoana sasany izay tsy ilanao ny serivisin'ny consultant na freelancer anao, fa noho ny fifanarahana mpihazona ny roa tonta dia voatery mandoa ilay olona ianao.
Noho io antony io, ny roa tonta dia tsy maintsy manonona ny adidiny sy ny andrasan'izy ireo rehefa mandrafitra ny fifanarahana voatazona ary hamerina hijery izany mba hahazoana antoka fa mahazo aina amin'ny fifanarahana izy ireo. Raha vantany vao manasonia ireo tsipika feno teboka ianao dia voafatotra ara-dalàna ary ny fialana amin'ny fepetra takian'ny fifanarahana dia mety hahatonga anao hitory.
Karazana fifanarahana mpihazona
Na dia misy orinasa mety mahazo tombony amin'ny fifaneken'ny fitazonana azy aza, ny hevitr'ireo mpiambina dia eken'ny orinasa mpanadihady, mpiasa tsy miankina ary serivisy ara-dalàna. Izany dia nilaza fa misy karazana fifanarahana roa mitazona fihazonana izay mety hahazoan'ireo orinasa voalaza etsy ambony tombony.
Izy ireo dia:
Fifanarahana momba ny retainer handoavana ny asa vita
Fifanarahana momba ny retainer handoavana ny fahazoana miditra amin'ny mpanome tolotra na consultant
Fifanekena ataon'ny retainer amin'ny fandoavana ny asa vita
Miaraka amin'ity karazana fifanarahana mpitazona ity dia omena vola ny mpikarakara na mpanolotsaina iray noho ny asany isam-bolana. Tsy dia mitovy amin'ny asan'ny freelancer mahazatra izy io, afa-tsy amin'ny maha-mpanome serivisy ho an'ny mpiambina anao dia azonao antoka fa misy asa avy aminao ary avy hatrany dia misy vola miditra.
Ity safidy ity dia mety ho tsara indrindra ho an'ny mpiasa tsy miankina iray izay miditra amin'ny kianjan'ny fifanarahana mpampihazona mpanjifany. Mazava ho azy, miankina amin'ny karazana serivisy hatolotry ny mpiasa tsy miankina ihany koa izany.
Fifanarahana mitazona ny fidirana ny retainer
Ity safidy ity dia laharam-pahamehana ary matetika no misy amin'ireo mpanome tolotra izay nahazo ny toe-java-maniry 'manam-pahaizana' na 'fahefana amin'ny sehatra nofidiny. Ao amin'ity modely ity, ny consultant dia tsy mila manisa ny asa vita mba hahazoana karama. Raha tokony ho izany, ny zava-misy fotsiny fa misy ho an'ny mpanjifa izy ireo dia ampy hanomezana azy ireo karama, na dia tsy mampiasa ny serivisy mihoatra ny indray mandeha na indroa isam-bolana aza izy ireo.
The maodely pay-for-access mampitombo be ny sandan'ny mpanome tolotra satria mampiseho fa mihevitra ny asanao fa tsy manam-paharoa ny mpanjifa mba hanomezana vola anao hatrany mba hahafahan'izy ireo manatona azy ireo fa tsy hanao veloma anao.
Fifanarahana mpanafika ao UAE
Ny drafitra fitazonana dia fanalahidin'ny fahombiazana maharitra sy ny faharetan'ny orinasa rehetra. Ny fifanarahana fitazonana dia ireo fifanarahana izay mamaritra amin'ny fomba ofisialy ny toetry ny fifandraisanao amin'ny mpisolovava anao. Ity dia fomba azo antoka kokoa sy mora kokoa hidirana amin'ny serivisy ara-dalàna sy drafitra ho an'ny ho avy.
Any amin'ny biraon'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, manolotra serivisy isan-karazany izahay, ao anatin'izany ny fandrafetana ireo fifanarahana momba ny fitazonana ho anao. Satria mikorontana tsy tapaka ny tontolon'ny asa noho ny fanavaozana miseho isan'andro, dia ilaina ny fananana fifanarahana fitazonana hita taratra ny fahamoran'ny fotoana. Hahazo izany rehetra izany ianao ary bebe kokoa rehefa manakarama anay ho mpisolovava anao. Manantona anay anio, ary andao hanomboka.